Ekunene kwiNkokeli eChongiweyo eChongiweyo kwiNtengiso yeMishini | Martech Zone
Ekunene kwiNkokeli eChongiweyo eChongiweyo kuThengiso lokuZenzekelayo
NgoLwesithathu, nge-4 kaJanuwari 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ngaphambi kokuba ufunde oku, ndiza kutyhila ngokupheleleyo ukuba ndingumhlobo noTroy Burk kunye no-Amol Dalvi kwaye uninzi lwabanye Ekunene kwi-Interactive (ROI). Kwaye-siyazingca ukwazisa ukuba siza kusebenza neLungelo kwi-Interactive ukubonelela ukuzenzekela ngokuzenzekelayo izithuba apha kwiMartech! Ngamaqabane ngokusemthethweni njengezolo!
Kulungile ke ukuba mhla siza kubhengeza ubuhlakani, oko GleansterInkampani yophando yentengiso, ipapasha uphononongo lwababoneleli bokuzenzekelayo abathengisa iRight On Interactive inkokheli kwisithuba. Ipholile kakhulu!
Ukusuka kwingxelo: Kude kube kutshanje, ukuthengisa izinto ezenzekelayo bekujongwa ikakhulu njengendlela engenabungqina kuphuculo lwentengiso oluqhutywa yidatha. Ngenani, iyantlukwano kunye nobunkunkqele bezisombululo ezinxulumene nokuqhuma, akusekho njalo. Iinkampani (zombini i-B2B kunye ne-B2C) ziyafezekisa iziphumo ezisusela kwiindleko zentengiso ezincitshisiweyo kunye nomlinganiso ongcono kunyuso lwengeniso kunye nenzuzo.
Ekunene kwi-Interactive kukhokelela ipakethe kumacandelo ama-3… abhalwe a umboneleli ozisebenzisayo wokuthengisa ngokuba:
Ayisiyonto intle leyo ... ishishini labo lihambelana nezinye izigebenga kwishishini, kubandakanya i-ExactTarget, iMarketo, Hubspot, Eloqua nabanye!
I-ROI ikwabekwa kwindawo ephezulu kwabo iimpawu kunye nokusebenza. Ukujonga nje ezinye izinto ezintsha abazikhuphelayo, ndiyakuqinisekisa ukuba kungekudala baya kuba yeyona kholamu ibalaseleyo yeempawu, kungekudala.
Ukusuka kwingxelo: Abasebenzisi bafumanisa ukuba imephu ye-ROI ye-Lifecycle yeLungelo lomenzi ibaluleke kakhulu kuba ibonakalisa apho ithemba kunye nomthengi ngamnye ahlala khona kubomi babathengi ngokusekwe kwiprofayili kunye namanqaku okuzibandakanya. Iqonga lenzelwe ukubonelela ngolawulo lwedatha, ukwahlulahlulwa, uyilo lomkhankaso, kunye nokufumana amanqaku. Kwi-Q3 ka-2011, i-Right On ikhuphe eyayo i-imeyile yokwakha, ukuhambisa, ukwahlulahlula kunye nokusebenza kokulandela.
Siyavuyisana neLungelo kwi-Interactive ngokubizwa ngegama njengenye ye eyona ntengiso izenzekelayo ababoneleli phaya! Yinkampani entle enemveliso engummangaliso.
Khuphela uphononongo lwababoneleli abazenzekelayo bokuthengisa kwiGleanster. Igcwele kakhulu nazo zonke iinkcukacha ozifunayo ukuze wenze isigqibo sokuthenga kwiimfuno zakho zokuthengisa ngokuzenzekelayo.
tags: Umdlali weqongaeloquangqoubhikicehubspotinkampani yokuthengisa esizisebenzelayoababoneleli bokuthengisa ngokuzenzekelayoukulinganisa ukuthengisaingxelo yentengisouphononongo lokuzenzekelayo kwentengisouphawuekunene kunxibelelwano
Feb 20, 2012 ngo-7: 25 PM
Enkosi ngokujonga uphando lwethu, uDouglas.
Siyayonwabela ibhlog yakho ngapha eGleanster!
Umdibanisi wophando eGleanster